Ogaden News Agency (ONA) – Baabuur cadawga lagaga gubay Geedi-aar iyo dagaalo ka dhacay goobo kale
Baabuur cadawga lagaga gubay Geedi-aar iyo dagaalo ka dhacay goobo kale
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya xarunta dhexe ee Jabhadda Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya ayaa sheegaya in dagaalo dhexmaray CWXO iyo kuwa cadawga uu khaasre balaadhan ka soo gaadhay ciidamadii cadawga , dagaaladan oo isugu jira mir, weerar fool ka fool ah iyo kamiin ayaa waxay ka kala dhaceen;
19/4/12 kamiin loo galay kolanyo gaadiid ah oo maraysay duleedka magaalada Dhagaxbuur meesha loo yaqaan Geedi-aar ayaa waxaa halkaa lagaga gubay ciidankii cadawga halbaabuur iyo dhamaan ciidankii saraa.
18/4/12 dagaal ka dhacay Isku-Dhoonlay oo ka tirsan degmada abri-dahar waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 kalana waa lagaga dhaawacay
19/4/12 dagaal ka dhacay Daradtoole oo ka tirsan Doollo waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 1 askari tira kalana waa looga dhaawacay.
23/4/12 waxaa kamiin xogan lagaga galay wadada isku xidha magaaloooyinka Goday iyo Qabri-dahar ,gaar ahaan inta u dhaxaysa tuulooyinka Dalaad iyo Kabti-naag oo koonfur galbeed kaga toosan magaalada qabri dahar, kana wada tirsan gobolka Qoraxay. Kamiinkan ayaa markriiba waxaa soo buuxiyay baabuur cadaw waxaana meeshaa lagu shiilay mid ka mida baabuurtii iyo dhamaan ciidankii saraa, oo noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay.
Falalkan kamiinka ah ayay ciidanka jwxo waxay si qorshaysan uga fuliyaan wadooyinka waawayn ee uu isticmaalo cadawgu taas oo ay uga jeedaan inay gooyaan isgaadhsiinta iyo taakulaynta ciidanka cadawga. Naftood-hurayaashii CWXO ee falkaas fuliyay ayaa waxay goobtii kaga baxeen si nabad ah.
24/4/12 dagaal ka dhacay degmada Yucub waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 1 askari 2 kalana waa lagagag dhaawacay.
Waxaa kale oo jira dagaalo mir ah oo aan laga hayn wax faahfaahinah iyadoo ay adagatahay in dagaalada dhaca habeenkii islamrkaana ka dhacay gudaha xeryaha cadawga laga helo war xaqiiqa ah khasaaraha ka dhacay goobtaas. Weerardan mirta ah ayaa ka dhacay goobaha Dhagaxbuur iyo Bulaale.
22/4/12 Waxa uu khilaaf xoogan oo ka dhex dilaacay ciidanka cadawga ee degen degmada Shilaabo kaas oo sababay dhinasho iyo dhaawac ,wararka laga helay dad ka agdhaw ciidamada gumaysiga ayaa sheegaya in dagaalkaa ay iskaga dileen 1 askari 6 kalana iskaga dhaawaceen.
Waxaa kale 18/4/12 ka goostay ciidanka cadawga ka dagan meesha loo yaqaan Gosolalay oo ka tirsan degmada Dhagaxbuur 4 sakri oo hubkoodii u dhan yahay.
Dhinaca kale waxaa jira inuu sii kordhayo baxsiga ciidanka cadawga , kaas oo muujinaya mooraal xumada ciidanka gumaysiga. Arimaha tacadiyada gumaysiga uu ku hayo shacabka ayaan gadaal ka soo qori doonaa wixii soo kordha.